देउवालाई सहयोग गरेपछि आलोचनामा परेका प्रकाशमानले अन्तत खोले मुख, के हो वास्तविकता ? - ramechhapkhabar.com
देउवालाई सहयोग गरेपछि आलोचनामा परेका प्रकाशमानले अन्तत खोले मुख, के हो वास्तविकता ?
नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापतिको दोस्रो चरणको चुनावमा आफूले उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई निःशर्त सहयोग गरेको स्पष्ट गरेका छन् । उनले केही सञ्चारमाध्यममा आफूलाई जोडेर भ्रमपूर्ण समाचार आएको भन्दै त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको एक प्रेस नोटमार्फत बताएका छन् ।
‘प्रथम चरणको निर्वाचनमा सबैले भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको तथा आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हुँदा मैले मेरो स्टेट फरवार्ड स्वभाव अनुरुप उहाँलाई समर्थन गरेको हुँ’, उनले भनेका छन्, ‘कुनै अन्य खाले अनर्गल भ्रममा नपर्न म सबै आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई अपील गर्दछु ।’
कांग्रेस महाधिवेशन : सभापतिको मतगणना आज राति १० बजेदेखि हुने, बाँकीको बिहीबार
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको जारी १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदका लागि भएको मतदानको मतगणना आजै राति १० बजेदेखि हुने भएको छ। उपसभापतिसहित बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना भने बिहीबारदेखि मात्र हुनेछ। सोमबार भएको निर्वाचनमा सभापतिका कुनैपनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि मंगलबार दोस्रो चरणमा मतदान भएको छ।
राष्ट्रिय सभागृहमा अहिले मतदान भइरहेको छ। सभापतिका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धामा छन्। पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिको रिङबाट बाहिरिएका प्रकाशकान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङदे देउवालाई समर्थन गरेका छन्।
मतदान सकिएलगत्तै आजै राति १० बजेदेखि सभापतिको मतगणना हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सभापतिबाहेकको मतगणना भने बिहीबारदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुनेछ।